Ukukhethwa okuhle kakhulu kwamanoveli omlando
Ukubuyekezwa kwenoveli yomlando
Izincwadi ezi-5 ezihamba phambili zikaMatilde Asensi
Umbhali othengisa kakhulu ngokwedlulele eSpain nguMatilde Asensi. Amazwi amasha nanamandla afana nalawa Dolores Redondo Basondela kulesi sikhala esihloniphekile sombhali we-Alicante, kodwa basenendlela ende okufanele bayifinyelele. Emsebenzini wakhe omude, ukuhweba kwakhe kanye nenani labafundi bakhe ...
3 izincwadi ezinhle kakhulu zikaRobert Graves
Ngenxa yokufunda incwadi ethi The Sixteen Trees of the Somme, kaLarss Mytting, ngavusa iqhaza likaRobert Graves omkhulu empini eyenzeka kuleyo ndawo yaseFrance iSomme, lapho kwafa amasosha angaphezu kwesigidi futhi okungokwakhe…
Izincwadi ezi-3 ezihamba phambili zikaJavier Negrete
Ukubhala ngolwazi lwamaqiniso ngezici ezihlala zibanga ukuncoma phakathi kwabafundi, ezinjengomlando wezinganekwane zomlando, sekuvele kunikeza iphuzu legunya nokuxazululwa kwendaba yendaba. Futhi kungukuthi uJavier Negrete, othweswe iziqu ku-Classical Philology, usebenzisa ithuba lakhe ...
Izincwadi ezi-3 ezihamba phambili zikaBernard Cornwell
Intandane yabo bobabili abazali kusukela esemncane kakhulu, uBernard Cornwell kungashiwo ukuthi uyisibonelo sombhali ozenzele yena. Yize kungukusebenziseka okungaphezu kokucatshangelwa kwezothando. Iqiniso ukuthi waba ngumbhali ngenxa yesidingo lapho esefudukele e-United States, ebeka ikusasa lakhe ...
Izincwadi ezi-3 ezihamba phambili zeHilary Mantel
Ngemuva kokuqala kokungabaza kwezincwadi phakathi kwezinhlobo ezihlukile njengezinganekwane zomlando nohlobo lwamanje lwezothando (lolo hlobo lwezindaba ezibomvana), uHilary Mantel usevele ungumbhali ohlanganisiwe womlando. Ngaphansi kwesambulela salolu hlobo lukwazile ukuwina izindondo ezimbili amahlandla amabili ...
Izincwadi ezi-3 ezihamba phambili zeSantiago Posteguillo
Mhlawumbe umbhali wokuqala waseSpain wezincwadi zomlando nguSantiago Posteguillo. Ezincwadini zakhe sithola umlando omsulwa kodwa singabuye sijabulele isiphakamiso esedlula amaqiniso omlando wokungena emlandweni womcabango noma wobuciko noma wezincwadi. Okwakhe…
Izincwadi ezi-3 ezinhle kakhulu nguJosé Luis Corral
Lapho isazi-mlando sithatha isinqumo sokubhala inoveli yomlando, izimpikiswano zisuka zifike ekugcineni. Yilokho okwenzeka kuJosé Luis Corral, umbhali wase-Aragonese ozinikele kakhulu kulolu hlobo lwenganekwane yomlando, ekushintshanisa nezincwadi ezinolwazi oluncane njengesazi esihle endaweni yakhe. Imvelo…
Izincwadi ezi-3 ezihamba phambili nge Umberto Eco
Isazi seminologist esiphikelelayo kuphela esingabhala amanoveli amabili afana neFoucault's Pendulum noma Isiqhingi Sosuku Olwandulelayo futhi singashabalali emzameni. U-Umberto Eco wayazi kakhulu ngokuxhumana nezimpawu emlandweni wesintu, waze wagcina echithe ubuhlakani kuyo yonke indawo kulaba ababili ...
Kwakunesikhathi lapho iYurophu kwakuyizwe elingakhululekile lokuzalelwa kulo, lapho izingane zafika emhlabeni phakathi kwesifiso, ukusiphula, ukuqhela ngisho nokwesaba abazali bazo. Namuhla lolu daba seludlulele kwezinye izingxenye zomhlaba. Umbuzo ukuthatha lowo mbono ...
Ubuntu bukaHildegarda busethula esikhaleni esinenkungu yenganekwane. Kuphela lapho izinganekwane zabangcwele nabathakathi zihlala ngokufana okufanayo ezinsukwini zethu. Ngoba namhlanje isimangaliso sokululama komuntu oyimpumputhe sinobuqili obufanayo nesipelingi esikwazi ...
Ikhasi1 Ikhasi2 ... Ikhasi14 Okulandelayo →